Furaha xoreynta iyo badbaadinta dadka Madowga / dadka Afrikaanka ah: haddii dadka Madowga / Afrikaanka ah ay rajeeyaan xoreynta iyo badbaadada, waxay u baahan yihiin fure, furahaanna waa mid ay gaari karaan
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 18, 2020 06: 44 1 Comment
Dadka qaaliga ah Black / Afrika, gaar ahaan adiga dadka reer Kongo: miyaad raadineysaa xoreyntaada iyo badbaadadaada? Ma ogi meel aad ka bilowdo ama sidee halkaa ma gelisaa ?? Qabo xoreyntaada iyo badbaadadaadu waa inay naftaada ka soo baxaan, waxaad jeceshahay inaad sameyso oo aad garato sida loo sameeyo; si ka sii fiican, waxaad maalin walba sameyso.
Waxaan si run ah u aaminsanahay, inaan badbaadiyo dadka Black / Afrika, in geeddi-socodka waxbarashadu ay ku dhacdo laba marxaladood: "Dhiirrigalin iyo macluumaad". Xaqiiqdi qof walba wuu ogyahay sida wax loo sameeyo wax gaar ah oo ka duwan. Midkastaba wuxuu leeyahay karti iyo aragti ay ku dheehan tahay in, mar haddii sifiican looga faa’iidaysto, taasina ay u saamixi karto inuu si togan u saameeyo jiilkiisa oo uu calaamadeeyo waqtigiisa. Qof kasta waa inuu la wadaagaa macluumaadka ku dhiirigelinta wanaagga dadka oo dhan.
Maanta, dad badan ayaa ku soo raacaaya, waxay jecel yihiin waxaad ka qabato fiidiyowyadaada… ECT : waa wax kaa fiican adiga! Si kastaba ha noqotee, araggaagu wuxuu yeelan doonaa macno dheeri ah illaa iyo markii aad bilaabi karto inaad na barto, si aad noogu gudbiso macluumaadka ama farriimaha dhiirigelintaada. Laga soo bilaabo buugga fiidiyowyadaada, ka faa'iideyso fursad aad ku gaarsiiso farriimo gaar ah, xitaa keliya 2-da daqiiqo ee ugu dambeysay inaad taabato waxa ka caawin kara dadka inay ka saaraan dhibaatada Black / Afrika, iyo gaar ahaan dadka reer Kongo.
Ha la ogaado waxaas oo dhan, si loo badbaadiyo Dadka Black / Afrika, furaha ma aha in meel kale loo eego si loo furo albaabka keena badbaadada; dadka Madowga / Afrika haysaa:"Waa ku filan inaad u soo jeesato waxtarka walaalahaaga iyo walaashaa waxa aad jeceshahay oo aad garaneyso sida ugu wanaagsan ee aad wax uga qaban karto".
Tani waa sida Congolisolo Waxay xasuusineysaa dhamaan isticmaaleyaasheeda internet-ka ee saaxiibtinimada leh inay ka dhigeyso qeyb loogu magacdaray "Booskaaga" inay helaan. Waa meel banaan. Marka waxaad u isticmaali kartaa inaad ku daabacdo waxyaabaha aad jeceshahay.
Qaddiyadda dadyowga u weecday dhaqankoodii hore: dadka aan taariikhdiisa aqoon u lahayn waxay la mid yihiin geed aan xidid lahayn "Fiiri indhoolayaashaas foosha xun (Muslimka / Masiixiyiinta) ee ku hawlan dhaqan-gelinta, waxay lumiyaan waqtigooda qaaliga ah ee ay kaga hadlayaan diimaha. ee sayidyadooda ”… (VIDEO)
Ma ogtahay Ku wajahan caanka ah Sainte Corona sababtoo ah Covid-19? Xilliyadii cudurka fayraska Corona ee 2019 (Covid-19), Saint Corona si lama filaan ah ayey uga soo baxday burburka taariikhda.
Foomkan faallooyinka ayaa laga ilaaliyaa farriimaha aan loo baahnayn
1 Wiilka faallooyinka
0 Jawaabaha mawduuca
Ka faalloodi falalka ugu badan
Faallooyinka ugu caansan
1 Qorayaasha qoraalka
Qorayaasha qoraallada ugu dambeeya
ugu dambeeyay kan ugu da’da weyn ugu caansan
faallo cusub oo la socosho jawaabaha cusub ee faallooyinkayga
Runtii olobi penza bosolo
Codbixinta0Codbixin Ka Bixi jawaab
18 / 03 / 2020 13 h 21 min